Office tools — MYSTERY ZILLION
ကဲ ဒီ Thread ကို အသစ်ဖွင့်လိုက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ လုပ်နေကြတဲ့ IT သမားတွေ၊ ကွန်ပျုတာ user တွေကို ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Tools လေးတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရယူနိုင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ Thread ကို အသစ်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် software တင်ကြတဲ့ သူတွေကလည်း ရုံးလုပ်ငန်းမှာ အသုံးတည့်မည့် software လေးတွေကိုသာ တင်ပေးကြဖို့၊ တောင်းခံတဲ့သူတွေကလည်း Thread ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီ တောင်းဆိုကြဖို့ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ....
ကျနော်တော့ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Software ပေါင်း ၁၁၄ ခုကို စမ်းသပ်သုံးစွဲပြီး တိတိကျကျ တင်ပြပေးပါ့မယ်....:5::5::5:
ကူညီဖို ့လိုရင် ကူညီပေးပါ့မယ်..
ကောင်းလိုက်တယ် အကြံညဏ်ဘဲ...။ ကျွန်တော် လည်း company ၀န်ထမ်းပါဘဲ။ လိုအပ်တာရှိရင် တောင်းမယ်နော်...။ ကျွန်တော် ဆီမှာ ရှိရင်လည်း မျှ ပါမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ရုံးဝန်ထမ်းတွေကြုံတွေ့ ရတဲ့အခက်အခဲလေးတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေး မဲ့ဟာလေးပါ firefox 3.0 အထိ သုံးလို့ရပါတယ်.... အဲ့ဒါလေးကတော့ Gtalk firefox plugin ပါဂျာ...:D:D:D
ဒါလေးကအပ်ဒိတ်ပါ 3.5 မှာပါရပါတယ်... Alt+G သာနှိပ်လိုက်ပေါ်လာပီ ဟိ....
Chief-Win PDF Converter Personal Edition 2.3.3
အင်စတော့လဲ လွယ်တယ်။ next လေးတွေနှိပ်ရုံဘဲ။ သုံးရတာလည်း လွယ်တယ်။
PDF ကနေ word ကိုပြောင်းရတာလည်း မြန်တယ်။
အဲ Text ချည်းဘဲ ထုတ်ချင်လည်း ရတယ်။
နောက် ပုံအနေနဲ့ထုတ်ချင်လည်း jpg နဲ့ပေးသေးတယ်။ မိုက်တယ်နော်။
ကျနော်တော့ Adobe Acrobat တောင် လေးလို့ဖြုတ်ထားချင်သေးတယ်...အဟုတ်ပြောတာ
အင်စတော့လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီလိုလေးဘဲမြင်ရတယ်။ ဒီပုံကိုကြည့်ရင် သုံးရတာ လွယ်မလား ခက်မလား သိနိုင်ဘီပေါ့။ ဖူးဗားရှင်ဖြစ်အောင် ခရက်ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်။
ဒေါင်းဖို့ကိုတော့ နေရာနှစ်ခုက တင်ပေးထားတယ်။
ဖရီးယူဇာကနေ ဆွဲရင် ပွိုင့်တတ်လို့ပါ... အဆင်ပြေရင် ကျနော့ကို ကူုညီရာရောက်အောင် ရက်ပစ်ကနေ အားပေးကြပါလို့နော်....
လာပြန်ဘီ PDF ကွန်ဗက်တာလို့တော့မပြောနဲ့နော်..............:P
နာမည်ကိုက Professional လေ။ တကယ့်ကို professional ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးရတာလည်း ဒီင်္လောက်မခက်ပေမဲ့ ပထမဟာလောက်တော့ အရမ်းမလွယ်ကူဘူးဗျ....
Converter က word၊ image၊ power point လိုမျိုး presentation ပုံစံ၊ web ပုံစံ၊ excel လို စာရင်းပုံစံတွေအထိ ထုတ်လို့ရတယ်လေ။
word အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း -
Microsoft Word 97/98 - 2003/2004
Plain Text - Machintosh
Plain Text - Windows
Unicode UTF-16 Machintosh
Unicode UTF-16 Windows
Unicode UTF-8 Machintosh
Unicode UTF-8 Windows ပုံစံတွေ။
Microsoft Power Point 2007-2008
Microsoft Power Point 97/98-2003/2004
Microsoft Excel 2007-2008
Microsoft Excel 97/98-2003/2004
အဲလို အားသာချက်လေးတွေရှိတယ်လေ။ ဆိုဒ်ကလည် မကြီးလွန်း မသေးလွန်းဘူး။ 13.5 MB ဘဲရှိတယ်လေ.............:5:
အဆင်ပြေရင် ကျနော့ကို ကူုညီရာရောက်အောင် ရက်ပစ်ကနေ အားပေးကြပါလို့နော်....
ရက်ပစ် ကဘယ်လိုလုပ် ဆွဲလို့ရမှာလဲ။ အကောင့်မှ မရှိတာ။ အကောင့်ပါ တစ်ခါတည်းပေးလေ။ ကျနော့ကိုလည်း ပြန်ကူညီရာရောက်တာပေါ့။
Snappy Fax v4.30.1.2
Fax Software တဲ့ဗျ....ကျနော်မှာ modem မရှိလို့ မစမ်းရသေးဘူး...
ကောင်းမယ်တော့ထင်တယ်...ဟိုးအရင်ကတော့ MightyFAX ဆိုတာလေး သုံးဖူးတယ်။
အခု ဒီဟာလေးကတော့ အဲဒီ့ MightyFAX ထက် Function ပိုစုံတယ်...
PDF Unlocker တဲ့ဗျ။ ကျနော်စမ်းကြည့်တာတော့ရတယ်။ သုံးရတာရော...install ရော လွယ်တယ်။
တစ်ချို့တွေက PDF လေးတွေနဲ့ Ebook လေးတွေလုပ်ပြီး ကိုယ်ရေးထားတာကို အလွယ်တကုူလည်းမမြင်ချင်တော့ password လေးတွေထား။ နောက်တော့မေ့သွားကြရော။ နောက်တစ်မျိုးက Authorize မရလို့ ဖွင့်မရတဲ့ PDF လေးတွေ။ ကျနော်တော့ Thesis တော်တော်များများမှာ အဲလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျ။ အဲလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီကောင်လေးက ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဗျ။
ထုံးစံအတိုင်း ifile နဲ့ရော ရက်ပစ်နဲ့ပါတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကွန်ကောင်းကြရင် ရက်ပစ်ကဆွဲကြနော်။
ကျနော် ဒီ Thread အတွက် software တွေရှာပြီး တင်တဲ့နေရာမှာ .............
သင့်တော်တဲ့ Software တွေ့ဘီဆိုရင် download ဆွဲ.... install လုပ်။ သုံးကြည့်တယ်။ ok တယ်။ သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်။ ဖူးဗားရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုမှ တင်ပေးတဲ့ စနစ်လေးကို သုံးနေတာမို့.... နည်းနည်းတော့ကြာမယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်ပေးတဲ့ software တိုင်းအတွက် အစ အဆုံးကူညီနိုင်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်မဂွတ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ update မဖြစ်ခဲ့ရင် သည်းခံစောင့်စားပေးကြပါလို့ စောစောစီးစီး မေတ္တာရပ်ပါတယ်ဗျာ................:77:
ကဲ .. ဒီတစ်ခါတော့ KGB ဆိုတာလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Refog KGB Employee Monitor v4.2.1 တဲ့ဗျ ဆိုဒ်က 5.58 MB ဘဲရှိတယ်။
ကျနော်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ သိလိုက်ရတာ ... IT Administrator တွေ Company Owner တွေ အတွက်တော့ သုံးသင့်တဲ့ ဟာလေပါ။ သူက key logger တစ်မျိုးဘဲ။ အဲ မော်နီတားရီးလည်း လုပ်ပြန်တယ်... အသေးစိတ်ကိုတော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ.... မသင့်ဘူးထင်လို့လေ။ ရည်ညွှန်းချက်လေးတော့ ထည့်ပေးလိုက်မယ်
PDFZilla v1.2.3 | 5.75 Mb
7-Zip 9.07 Beta |2MB - RS
Microsoft Office 2003 အသုံးပြုတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းအများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာပေါ့ဗျာ။
2003 နဲ့ 2007 File တည်ဆောက်ပုံ ကွာဟမှု့ကြောင့် 2007 နှင့် Save လုပ်ထားသည့် File များကို 2003 တွင်ဖွင့်လို့မရနိူင်ပေ။
ထိုအခါမျိုးတွင် 2007 ရှိသည့်စက်ကိုသွား 2003 File Format နှင့်ပြန် Save..... အလုပ်ရှုပ်သွားမယ်။
Microsoft က ထုတ်ထားတဲ့ File Format Converter လေးကို install လုပ်ထားလိုက်ပါ။
2007 နှင့် save လုပ်ထားသော files များကို 2003 တွင်ဖွင့်လို့ရအောင် convert လုပ်ပေးသည်။
အသုံးပြုပုံကလဲ သိပ်မခက်လှ။ install လုပ်ပြီးတာနဲ့ 2007 file တွေကို 2003 file ဖွင့်သလို double click နှင့်ဖွင့်ရုံသာဖြစ်သည်။
ဒီ နေရာ မှာ Down ကြပါရန်။
လူဇိုး...သူပွိုင့်တက်ဖို့ ဒီကလူက သူ ရက်ပစ်ကို ဆွဲရအုံးမယ် ဟွန့်...:P မဆွဲပါဘူး။ ကိုယ့်တို့က.. ifile user တွေပါ:D:D။ ရက်ပစ်က ဆွဲစေချင်ရင်တော့....အကောင့်လေးသာ မ စလိုက်။ သေချာတာကတော့..ပွိုင့်တက်လိမ့်မယ်။:)):))
အကောက်တော ့မပေးနိုင်ပါဖူးဆိုတဲ ့သဘောပေါ ့နော်..ဟီး
ဖွပြီနော်..အဟ တေစမ်း :p:p
This book isamust read for anyone deploying BusinessObjects. It covers everything from planning your upgrade to the latest release, to best practices in universe design, and powerful report creation that maximizes business insight. This book covers the most frequently used features for the full BI suite, in one comprehensive book.
ThereвЂ™s in depth coverage of Designer, security via the Central Management Console, InfoView, Web Intelligence, and Desktop Intelligence. It goes beyond step-by-step instructions to cover how and why inabusiness context. Transition notes are interspersed for version5and6customers to understand the biggest changes in XI Release 2. If you drive BI requirements in your company or areadata warehouse program manager, Business Objects administrator, report author or consumer, this book is for you.. .
Password default : ebookhouse.org
Expand your website and applications using mashups
Gainathorough understanding of mashup fundamentals
Clear, detailed walk-through of the key PHP mashup building technologies
Five fully implemented example mashups with full code
Product Description Network Coding Applications looks at how ideas from network coding can have an impact onanumber of new applications. Network coding is an elegant and novel technique introduced at the turn of the millennium to improve network throughput and performance. It is expected to beacritical technology for networks of the future. Today, more and more researchers and engineers ask what network coding is, what its benefits are, and how much it costs to design and operate networks implementing network coding. Network Coding Applications deals with wireless and content distribution networks, considered to be the most likely applications of network coding, and it also reviews emerging applications of network coding such as network monitoring and management. Multiple unicasts, security, networks with unreliable links, and quantum networks are also addressed. In tandem with the previous companion text on the theoretical foundations of network coding, Network Coding Applications provides the reader withacomprehensive state-of-the-art of this fast evolving research area.
Understanding .NET (Independent Technology Guides)
MicrosoftвЂ™s .NET is revolutionizing Windows-based software development. Since its initial release in 2002, .NET has changed significantly, becoming the foundation foranew generation of Windows applications. The .NET Framework and Visual Studio, the two core aspects of this initiative, provideamultilanguage environment in which developers can create Web services, graphical user interfaces, and other kinds of applications.
Taken asawhole, the .NET technologies have changed the way nearly every Windows application is built. Now fully updated for version 2.0 of the .NET Framework and Visual Basic 2005, Understanding .NET, Second Edition, isaconcise guide to the landscape of Windows development. Margin notes, detailed diagrams, and lucid writing make this book easy to read and navigate, while analysis sections explore controversial issues and address common concerns. David ChappellвЂ™s independent perspective and straightforward descriptions clarify both how the .NET technologies work and how they can be used. Coverage includes *An overview of .NET and its goals *The Common Language Runtime (CLR) *The .NET languages, including C#, Visual Basic, and C++ *The .N ET Framework class library *Building Web Applications with ASP.NET *Accessing Data with ADO.NET *.NET framework integration with SQL Server 2005 The key to usinganew technology is to understand the fundamentals. This book provides the robust foundation developers and technical managers need to make the right decisions and maximize the potential of this revolutionary framework.
Product Description Application architecture is an essential skill for ASP.NET developers. It is always tempting to jump in and start coding, but planning your architecture early in the project will leave you withasolid application that scales well, is easy to modify and extend, and saves you time and effort later on. As businesses struggle to control their costs, writing solid code that can be extended easily is becoming even more important. This book takesapragmatic approach to Application Architecture in ASP.NET 3.5. It presentsaseries of common architectural models, and shows how to select the best ones for your project and apply them. The book begins by showing you how to use the main architectural models in your applications. You will see how to implement n-tier architectures, MVC, design patterns, and more. But this is no software engineering theory book - it isapractical, hands-on guide that shows you how to use these techniques in your software straight away. We then go on to build SOA (Service-Oriented Architecture) applications with the Windows Communication Framework (WCF). Finally the book contains some essential guidance on effective database design, andachapter on localizing your applications. This book isagreat way to learn ASP.NET Architecture inapractical, hands-on way. It will also serve asaquick reference for improving your application design.
ItвЂ™s important for anyone who creates Web sitesвЂ“even those who rely on powerful editors like Dreamweaver or GoLiveвЂ“to know HTML. The World Wide Web Consortium rewrote HTML asasubset of XML (dubbing it вЂњXHTML 1.0″) and the allowable code will eventually be stricter. Tags that are being phased out are labeled вЂњdeprecatedвЂќвЂ“current browsers can still handle them, but if you want your site to keep up with future browsers, not to mention conform to accessibility requirements, you will want to get on top of XHTML.
As with all Visual QuickStart Guides, this one features clear and concise instructions side by side with well-captioned illustrations and screen shots that show both the source code and the resulting effect on the Web page. The index is extremely detailed, making thisagreat reference. Also great for reference are the outstanding appendices. The first is an extensive list of tags and attributes, indicating which are deprecated and/or proprietary and on which page they are discussed. A similar appendix shows CSS properties and values; given the future of Web coding, this chart alone is worth the price of the book. Other handy charts cover intrinsic events, symbols and character Unicodes, and an expanded color chart that goes way beyond the virtually archaic Web-safe palette. All of which makes thisadefinite must-have for every Web designerвЂ™s bookshelf.
Publisher: Peachpit Press;6edition (August 16, 2006)
Get ready to create your own J2ME game! This updated edition to the popular J2ME Game Programming provides updated sofware coverage as well as updates to the programming approaches specific to Java ME software. It also covers the recent innovations in mobile games with relations to iPods and cell phones. You will learn the essentials of J2ME game development from the ground up.
Throughout the book you will discover the issues involved in developing for multiple target devices and how to work through the jungle of device-specific libraries and device capabilities. Working onalimited platform it is important to squeeze as much as you can out of those precious bytes, so in this book you will find the tools and source code you need to get the most out of the constrained resources. You will also learn how to structure your code and classes to achieve as small an application footprint as possible. As you work toward developing your own J2ME game, youвЂ™ll examine the game lifecycle, how to handle resources, various methods of drawing to the screen, optimizing memory usage, handling the users input, and even sharing high-scores online! Previous experience in programming object-oriented languages andabasic level of math skills is recommended.
A lifesaver for any Java programmer-proven workarounds and time-saving solutions Although using the Java language providesasubstantial boost toaprogrammerвЂ™s productivity, it still has its share of subtleties andweaknesses. This book is designed to save you time and frustration by carefully guiding you through this potential minefield. A team of Java experts, led by programming guru Michael Daconta, offersacollection of proven solutions to 50 difficult, real-world problems chosen from their own extensive experiences. YouвЂ™ll find workarounds for problems caused by shortcomings in both the Java language itself and in its APIs and utilities, including java.util, java.io, java.awt, and javax.swing. The authors also share techniques for improving the performance of your Java applications.
Java is here to stay. As the roles of Java in business and e-business applications continue to grow, all iSeries and AS/400 IT professionals haveachoice to make. Learn Java, or get left behind. If you areaprogrammer who wants to stay on the cutting edge of your career, you will have to learn Java, and you will have to use Java. If you areadevelopment manager, you will need to understand Java and its promise. If you are an architect, it is even more important to know Java and know when and where to use it. Or not use it. IBM is not abandoning RPG, but more and more Java is findingarole in leading-edge applications. For an RPG programmer, learning Java can be daunting, but with the right help, itвЂ™saskill that can be mastered. This book offers that help. It gently yet comprehensively walks you through the Java language and core Java-supplied functionality. Best of all, you will learn Java by comparing it to RPG! You learned RPG. Leverage that investment and learn Java!
Publisher: OвЂ™Reilly Media, Inc. | 1997-06-01 | ISBN 1565922891 | PDF | 312 pages | 1.22 MB
Java Beans is the most important development in Java this year. It gives Java developers the ability to work with sophisticated graphical development tools and to integrate Java software into projects using other component technologies, such as MicrosoftвЂ™s ActiveX. Developing Java Beans gives youafirm grounding in every aspect of the Java Beans component architecture. YouвЂ™ll learn how to create components that can be manipulated by tools like BorlandвЂ™s JBuilder or IBMвЂ™s VisualAge for Java, enabling others to build entire applications by using and reusing these building blocks. Beyond the basics, Developing Java Beans teaches you how to create Beans that can be saved and restored properly; how to take advantage of introspection to provide more information aboutaBeanвЂ™s capabilities; how to provide property editors and customizers that manipulateaBean in sophisticated ways; and how to integrate Java Beans into ActiveX projects. If youвЂ™reaJava developer, youвЂ™ll want to take advantage of JavaвЂ™s component architecture. Developing Java Beans gives youacomprehensive introduction to this exciting new technology. The book covers:
၀င်ကူုပြီးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး မိရေမရေ...
ဒါပေမဲ့ နင့်ဟာတွေက ebook တွေလေ... ခေါင်းစဉ်က Office Tool လေဟာ....
လွဲလွဲလေးလဲ ကောင်းပါတယ်...လို့ဆိုရတော့မလိုပါလားကွယ် :2:
Microsoft Office 2007 တောင် ဘယ်လိုနေမှန်း မသိသေးဘူး... Office 2010 တော့ ထွက်လာပြန်ပြီး.. လိုချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...:P
power point ဖိ်ုင်တွေကို DVD စက်တွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ၊ တစ်ခါတစ်ခါဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ သူများ -
ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးယာဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ power point တွေ၊ အချို့သော power point Presentation လေးတွေ၊ power point ebook တွေ စတဲ့ဟာလေးတွေကို ဖတ်ချင်ပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင် PC မရှိလို့ အခက်တွေ့နေသူများ -
Nitro PDF Professional 5.5 တဲ့
PDF ဖိုင်လေးတွေကိ်ု ပြင်ချင်ကြတယ်။ အရင်ကဆို PDF Converter တွေနဲ့ word ကိုပြောင်း။ အဲမှာ ပြင်။ ပြီးတော့မှ PDF Professional နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် PDF Printer နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် Create လုပ်။ ရှုပ်လိုက်တဲ့ အဆင့်တွေ။
လာပါဘီဗျာ။ Nitro PDF Professional
Adobe Acrobat Reader တွေ Acrobat Professional တွေ နားထား..............
Create လုပ်ပီးသား PDF တွေကိုလည်း ပြင်ချင်သလို ပြင်လို့ရတယ်။ အသစ်လုပ်ချင်တာလား...ရတယ်ဗျာ။ အော်...ပုံတွေပါထည့်ချင်၊ ဖြုတ်ချင်တယ် ဟုတ်လား။ ရသေးတယ်...ဗျာ...အင်တာနက်က လင့်တွေထည့်ချင်တယ် ဟုတ်စ... မပူနဲ့ ဒီကောင်လေးက ကူညီလိမ့်မယ်.....
တစ်ခုတော့ရှိတယ်....Scan ဖတ်ပြီး PDF ထုတ်ထားတဲ့ ဟာတွေရဲ့ စာတွေကိုတော့ ပြင်မရဘူးနော်...
FLV Video နှင့် Audio များကို Download လုပ်ရာ၌ ဒီ FLV Downloader ဖြင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အထူးအားဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများအတွက် Youtube, Yahoo, Google, MySpac, iFilm, Dailymotion, Metacafe အစရှိတဲ့ website တွေကနေ FLV ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို အလွယ်တစ်ကူ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... သူရဲ့ Features တွေကတော့ အောက်မှာကြည့်ပါ...
* Watching network traffic and identifying potential video, and download them automatically
* Support HTTP and RTMP protocol
* Batch download FLV Streaming
* Download more format video and audio files(MP3,MP4,M4A,M4V, F4V files)
Adobe Photoshop CS4software လေးဖြစ်ပါတယ်
ဒါလေးကို အရမ်းလိုချင်ပါတယ်။ 10MB စီပိုင်းပြီး တင်ပေးလို့ရမလား။ dial-up user မို့ပါ။ resume လည်းမရတဲ့ site တွေဆိုတော့ မလွယ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :6:
swf file ကျ flash paper ပုစံ ထုတ်ပေးတာလား၊ ဟုတ်တယ်ဆို လိုချင်လို့ ifile မှာတင်ပေးလို့ ရမလား။ rapidshare ကတော့ လုံး၀မရလို့ပါ။ thankssss.... :6:
livingmachine wrote: »
ကျေးဇူး ဗျို့ မိုက်တယ်
ifile က file expired တဲ့
rapidshare က PDF Converter တဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ် .. ကူညီပါဦး
ရက်ပစ်က လင့်ကိုတော့ ပြန်ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ifile ကတော့ ခဏစောင့်ပါဦး ...:P
မားသားဘုတ်တွေမှာ driver cd တွေမရှိတော့လို့ တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်...
ဒီ software လေးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်
connection အဆင်ပြေရင်တော့ အိုင်ဖိုင်ကနေ တင်ပေးပါ့မယ်